Qaybaha ku jira Androidsis
In Androidsis waxaad awoodi doontaa inaad si joogto ah ula socoto dhammaan wararka ku saabsan caalamka Android. Qaybaha kala duwan ee shabakada waxaad ka akhrisan kartaa waxyaabaha ku saabsan ciyaaraha ama barnaamijyada laga bilaabo Android. Sidoo kale marwalba ha ahaato taleefoonada ugu dambeeya, kiniiniyada ama smartwatch-ka soo gala dukaamada, iyo falanqaynta moodooyinka ugu caansan qaybtaan.
Sidoo kale ma seegi kartid casharrada iyo tabaha ku jira Androidsis, oo aad ugu isticmaali karto taleefanka Android ama codsiyada qaab aad waxtar u leh, oo leh raaxo weyn.
Marka la soo koobo, in had iyo jeer lagaa wargeliyo waxa ku dhacaya Android, Androidsis waa websaydh tixraac ah. Hoos waxaad ka arki kartaa dhammaan qaybaha in our kooxda tifaftirka cusbooneysii maalin kasta:
Muusig bilaash ah
Soo kabashada Android